Lehibe ny Fifandraisana: ny Olona ny fomba Fijery ny
Ahoana no milaza tsotsotra ny fiarahana amin’ny lehibe. Aiza izay tsipika eo fotsiny ny fiarahana sy ny fifandraisana matotra. Ny vehivavy sy ny olona tsy mitovy hevitra mikasika ny maha zava-dehibe ny fifandraisana. Hanampiana izany koa, ny lehilahy dia tsy vonona ny fanoloran-tena raha vao toy ny vehivavy. Ny iray amin’ireo malaza indrindra ny antony fa mety ho ny vao tsy nahomby ny fifandraisana izay nampalahelo azy indrindra. Na izany aza, ny ankamaroan’ny bandy fotsiny aza t te-ho very ny fahafahana. Izy ireo no matahotra fa ny mahazatra dia azo ovaina amin’ny tsy tena tsara ho azy ireo ny fomba. Mihatra amin’ny tena ny olona ao amin’ny s. Izany no fotoana ry zalahy tsy t te-manasarotra ny fiainana amin’ny maha-tena matotra ny fiarahana. Izy ireo manao izany fotsiny ho an’ny fahafinaretana ary aza t mora ny mieritreritra fa izany dia mety hampivelatra ao zavatra betsaka kokoa. Raha ny vehivavy tia mizara fotoana bebe kokoa miaraka amin’ny olona izy ireo daty, ny lehilahy dia tsy araka izany ny hafanam-po momba ny fanomezana rehetra ireo afaka ora iray ny vehivavy. Izy ireo dia tsy vonona ny handany ny hery sy ny ezaka amin’ny fifandraisana izy ireo, satria mila azy ireo ho fahazoan-hafa tanjona eo amin’ny fiainana. Mazava ho azy, ny olona te-hanatanteraka ny tenany sy mijoro mafy amin’ny tongotra aloha izy ireo dia afaka ny hanorim-ponenana any. Ankehitriny, aoka s mandroso izany ho an’ireo lehilahy izay efa nametraka ny fiainany ary dia misokatra ho an’ny fifandraisana. Eto no tena hita mazava ny fiarahana ho lasa matotra kokoa.
Tokony mahatsapa fa mahazo zavatra lehibe kokoa raha toa ianao mahatsiaro ho mahazo aina ny olona. Ny s ny haavon’ny fampiononana fa mpivady izay ve niaina nandritra ny taona maro. Fahanginana tsy afaka ny ho hafahafa ho anareo roa intsony. Mahatsapa tena OK nipetraka tao amin’ny efitra iray manao ny zavatra, ohatra, izy ireo dia namaky, ary ianao dia manoratra zavatra eo amin’ny solosaina findainy (izany raha toa ka efa miaina miaraka). Na ny s efa tsy ilaina ny miresaka momba ny zavatra toy ny mandeha tanana amin’ny tanana: don t mila teny ho tia ny hafa ny orinasa.
Ny antso an-damosinareo dia haingana
Raha toa ka mampiaraka ny vehivavy tsy anisan’izany ny ao an-drafitra ho an’ny hoavy akaiky indrindra, mazava ho azy, dia tsy hoe ho azy sy ny mampiaraka dia tsy mitombo an-fifandraisana. Raha tsy t tena miahy ny olona iray, dia tsy mamaly ny hafatra na antso azy indray ny faharoa dia mahita anao nahatratra ny antso. Ny f fa dia izay raha ny s mety ho anao. Ny toe-draharaha isan-karazany rehefa lehibe momba ny olona sy ny bebe kokoa ny fifandraisana. Amin’ity tranga ity, dia ll mihetsika toy ny greased tselatra. Tsy misy intsony ny adin-tsaina na tsindry. Raha ny daty aza t hampahatahotra anao, ary tsapanao ny tena miadana miaraka amin’ny mpiara-miasa, ianao ve tonga teo amin’ny fotoana izay ny fifandraisana no manomboka. Ny maha zava-dehibe ny fifandraisana miafina ao ambadiky ny hoe casualness sy ny fampiononana anareo hahatsapa ny maha-manerana ny tsirairay. Mety toa tsy mifanaraka, fa izany no tena famantarana ny zavatra lalindalina kokoa sy akaiky kokoa eo amin’ny roa ianao.
Tsy misy intsony ny henatra
Toy ny hafahafa mampangina nanjavona avy amin’ny fifandraisana, ka dia isan-karazany ny henatra. Ianao don t ny fikarakarana ny be momba ny fomba fijery, ary aza t miezaka ny mba ho tsara kokoa noho ny tena dia. Mety ho adaladala ohatra, fa ianao no tsy menatra intsony mampiseho ny mahantra sary izay manana ny antsasaky ny nikimpy maso na hafa mahazatra lava tsy mahavita izay hitranga amin ny tarehintsika rehefa manana ny sary nalaina. Izany dia miaraka amin’ny mpiara-miasa: izy raha tsy t mahalala ny momba azy ny maraina no makeup jereo, hitanao ve tonga izay sehatra izay vonona ho zavatra matotra.
Nihaona tamin-samy hafa ny fianakaviana
Ny tena miharihary mariky ny fifandraisana lehibe fivoriana samy hafa ny ray aman-dreny. Amin’ny ankapobeny, ny olona tsy t hampiditra ny daty ny fianakaviana, raha tsy mahalala izany ny zavatra lehibe sy maharitra
← Benched - Ny Tsara indrindra safidy ny Lahatsary Mampiaraka sy Chatroulette
Avy any ivelany ny olona mizara ny toro-hevitra ny amin'ny fomba woo vehivavy tanora ao Shina - ny Global Times →